Nagarik Bazaar - फेसबुकमा अपलोड गरेका सबै फोटोहरू एकैपटकमा कसरी डाउनलोड गर्ने?
फेसबुकमा अपलोड गरेका सबै फोटोहरू एकैपटकमा कसरी डाउनलोड गर्ने?
तपाईंले फेसबुकमा हालेका तस्विर र भिडियोहरूलाई एकैपटकमा डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ । यदि तपाईंलाई आफूले अपलोड गरेको सम्पूर्ण फाइलहरु एकैपटकमा चाहिएको छ वा यदि तपाईं सधैको लागि फेसबुक बन्द गर्न चाहनुहुन्छ भने फेसबुकबाट तपाईंले आफ्नो सबै जानकारी डाउनलोड गर्नु उचित हुन्छ ।
१. कम्प्युटरको ब्राउजरबात फेसबुक खोल्नुहोस र फेसबुकको पेजमा माथि पट्टिकोको दाहिने भागमा रहेको Settings मा क्लिक गर्नुहोस्
४. त्यहाँ देखाइएको सूचीबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने जानकारीलाई मात्र चयन गर्नुहोस् - तस्विरहरूका लागि Photos and Videos विकल्पलाई चयन गर्नुहोस्